Par Taratra sur 02/05/2016
Lasan’ny jiolahy ny vola mitentina 2,4 tapitrisa ar an’ny teratany indianina iray notafihin’ny jiolahy tao Andabatoara Morondava, ny zoma alina teo. Niditra an-keriny tao an-tranon’ity teratany indianina ity ireo jiolahy ka ny vola no notadiavin’izy ireo. Ny polisy ao Morondava kosa no mandray an-tanana ny fanadihadiana.
Maty notifirin’ny jiolahy tao an-tranony ao Antsindrindava Maintirano, ny alakamisy teo ny mpanolotsain’ny kaominaly antsoina hoe Katsaka. Tsy nisy zavatra very anefa tao aminy nandritra ny fanafihan’ireo jiolahy. Nidina teny an-toerana ny borigadin’ny zandary ao Maintirano.
Olona miisa sivy indray maty voatifitra nandritra ny fifanoherana tamin’ny andian-dahalo tao Andranotoha Anivorano Bekily, ny alakamisy teo. Dahalo miisa 50 nitondra basy Kalach sy basim-borona no tompon’antoka tamin’ny fanafihana. Omby miisa 90 lasan’ireo malaso. Lavon’ireo malaso nandritra ny fanarahan-dia ireo olona sivy. Mitohy ny famotorana ataon’ny zandary.
Dahalo miisa 12 indray saron’ny zandary tao Ankazobe, ny herinandro teo. Tompon’antoka tamina fanafihana tany amin’iny faritra iny ireto dahalo ireto, araka ny fanazavan’ny zandary. Vola mitentina antapitrisa ny azon’izy ireo tao amin’ilay trano notafihiny.